Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mgbọ gbara na ọdụ ụgbọ elu Atlanta International
Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị mmadụ na-ekpuchi
Ọ bụ ụbọchị na-arụsi ọrụ ike na nyocha nchekwa TSA na Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport na Satọde a tupu izu njem kachasị na US - Ekele. Ọnụ ọgụgụ ndekọ ndekọ nke ndị njem na-eme njem maka ezumike ahụ. TSA kọrọ ụnyaahụ ọ nyochara ihe karịrị nde ndị njem 2.2.
Mgbọ egbe gbapụrụ na-akpata ọgbaghara na ebe nchekwa isi. Vidio dị na soshal midia gosiri ndị mmadụ dina n'ala, uwe na ihe onwe ha gbasasịrị n'ala. A chụpụrụ ụfọdụ ndị njem, ma hapụkwa ụfọdụ ka ha na akpa ha guzoro n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ tụgharịrị na ọ bụ mwepu egbe na mberede, ọ bụghị agbapụ agbapụ. Enweghị mmerụ ahụ a kọrọ.
Hartsfield-Jackson Atlanta International ọdụ ụgbọ elu tweeted. "Enweghị ihe ize ndụ nye ndị njem ma ọ bụ ndị ọrụ."
Ndị uwe ojii Atlanta na-arụ ọrụ iji chọpụta ọnọdụ gbara ihe merenụ.
Na nso nso a, ụgbọ elu ndị na-apụ apụ nọ n'okpuru ọnụ ụzọ ámá ma na-enwe igbu oge n'okpuru nkeji iri na ise, ebe ụgbọ elu na-abịarute na-enwe oge igbu oge, Federal Aviation Administration kwuru.